ဆောင်းရာသီ crackling မီးလောင်မှုတည်ဆောက်ရန်စုံလင်သောအချိန်ဖြစ်ပါသည်, လုံခြုံစွာတောင်စောင်း hit, snowmen တည်ဆောက်ရန်နှင့်လက်ဖက်ရည်တစ်ကောင်းတဲ့ခွက်ကိုအတူတက် snuggle. ကံမကောင်းသဖြင့်, ကအားလုံးကိုမဟုတ်ဘူး ပျော်စရာနှင့်ဂိမ်းများ. ဆောင်းရာသီလည်းအများဆုံးသစ္စာပျက်သောလမ်းအချို့ကိုဖန်တီးပေး အခြေအနေများ. သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့အများစုကသည်အထိ hibernate ရန်အဘို့အဖြစ်နိုင်မယ့် နွေဦး, ဒီမှာပါ အကြံပေးချက်များ ဆောငျးရာသီကာလအတွင်းကားမောင်းနေစဉ်သင်လုံခြုံနေဖို့ဘယ်လိုလိုအပ်ပါတယ်.
မြင်နိုင် Be: သင့်ရဲ့မော်တော်ယာဉ်များ၏အင်တင်နာတစ်တောက်တောက်ရောင်စုံသောအထည်ကိုကြိုးနဲ့တုတ်သို့မဟုတ်ဒုက္ခဆင်းရဲအချက်တစ်ခုတက်လှိမ့် window ၏ထိပ်မှာအထည်နေရာ. ညမှာ, ဖြစ်နိုင်လျှင်အပေါ်အမိုးခုံးအလင်းကိုစောင့်ရှောက်. ကိုယ်ကသာလျှပ်စစ်မီး၏သေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏကိုအသုံးပြုသည်နှင့်လွယ်ကူကယ်ဆယ်ရေးသင်ရှာရန်အဘို့အစေမည်.
အဆိုပါအိပ်ဇောပိုက်ရှင်းလင်း: အဆိုပါအိပ်ဇောပိုက်ဆီးနှင်းနှင့်အတူပိတျဆို့နတေဲ့သည်မဟုတ်သေချာအောင်လုပ်ပါ, ရေခဲသို့မဟုတ်ရွှံ့. တစ်ဦးကပိတ်ဆို့အိပ်ဇောပိုက်အင်ဂျင်အလုပ်လုပ်နေစဉ်ယာဉ်များ၏ခရီးသည်အခန်းသို့ပေါက်ကြားဖို့သေစေနိုင်သောကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်ဓါတ်ငွေ့ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်.
ပူနွေးနေပါ: အေးမှသင်၏ခန္ဓာကိုယ်သီးခြားထားပေးရန်ရရှိနိုင်ပါသည်ဘာပဲအသုံးပြုမှု. ဒါကကြမ်းပြင်ဖျာတို့ပါဝင်သည်နိုင်, သတင်းစာများသို့မဟုတ်စက္ကူမြေပုံ. pre-pack ကို အရေးပေါ်၏အမှု၌အသုံးပြုရန်အတွက်စောင်များနှင့်မိုးသည်းထန်စွာအဝတ်အစား.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုခရက်ဒစ်ပေးနိုင်ပါသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်သင်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/safe-driving-during-winter/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)